Macluumaadka Tallaalka COVID-19 - Xarunta Caafimaadka Lancaster Macluumaadka Tallaalka COVID-19 - Xarunta Caafimaadka Lancaster
Información sobre la vacuna COVID-19 Isbaanish
Hada waan talaalaynaa dadka waaweyn oo dhan Kuwa jira 18 iyo wixii ka weyn. * Wac si aad ballan ugu qabsato mid ka mid ah xarumaheenna:
»Holland cusub: 717-351-2400
CUSUB - Dhacdada tallaalka pop-up:
»Taariikh: Sabti, Abriil 24
»Goobta: Ururka Daryeelka Bulshada, 625 South Duke Street, Lancaster
»Waqtiga: 8 subaxnimo - 5 galabnimo
» U furan bukaan socodka & bulshada. Wac 717-299-6371 si aad ballan u qabsato.
* Hada waxay bixineysaa talaalka Moderna
Tallaallada COVID-19 - xaqiiqooyinka iyo faa'iidooyinka:
COVID-19 tallaalka waxyeellooyinka:
Tallaalka ka dib, waxaa laga yaabaa inaad yeelato waxyeellooyin hargab u eg. Tan macnaheedu maahan inaad jirantahay - waa astaan ​​muujineysa in jirkaagu dhisayo difaac isla markaana uu diyaar u noqon doono la dagaalanka fayraska!
Dadka badankood waxay dareemaan waxyeellooyin xoogaa xoogaa ah kadib qaadashadooda 2aad haddii ay tahay tallaal 2 qiyaas ah. Daawada xanuun joojiyaha oo laga iibsado miiska lagaa iibsado ayaa kaa caawin kara dhibaatooyinkaan soo raaca.
Dadka badankood waxay soo sheegeen inay dareemeen farxad, caafimaad, iyo inay dib ugu laabteen 100% 24-48 saacadood kadib!
Fiirin dhow oo ku saabsan tallaalada COVID-19:
Tallaalada Moderna & Pfizer
Tallaallada Moderna & Pfizer waa nooc cusub oo tallaal ah oo loo isticmaalo Messenger RNA (mRNA)
tallaalka mRNA ayaa sharaxay: mRNA waa sida emaylka oo nidaamkaaga difaaca u sheega sida uu fiiruska u eg yahay, tilmaamaha lagu dilo, ka dibna la waayo. 30 sano ka hor, saynisyahannadu waxay bilaabeen inay soo saaraan tallaalada mRNA - taas oo ah ma samayn ku jira fayraska, si ka duwan tallaallada dhaqameed sida tallaalka hargabka.
Sidee ayaan ku gaarnay tallaalka COVID-19: Tallaalada mRNA ayaa aad uga dhakhso badan marka loo eego tallaallada dhaqameed. Markii uu faafa ku dhacay, saynisyahannadu waxay isticmaaleen qaab dhismeedka hiddo-wadaha coronavirus si loo abuuro isku xigxiga mRNA sax ah. Dr. Kizzmekia Corbett, oo ah haweenay madow dhakhtar ah isla markaana saynisyahan ah, ayaa gacan weyn ka geysatay soo saarista talaalka Moderna mRNA. Moderna iyo Pfizer waxay ahaayeen labadii tallaal ee uhoreeyay ee ay ogolaatay FDA.
Borotokoollada amniga iyo baaritaanka ku filan: Labaduba waxay qayb ka ahaayeen sameynta tallaalka COVID-19. Maalgelinta caalamiga ah ee tallaalka COVID-19 ayaa loo oggol yahay tijaabooyin caafimaad oo aad u ballaaran, si fiicanna u socda oo na tusay in tallaalku yahay mid ammaan ah.
Waxtarka tallaalka: Tallaalada Moderna & Pfizer waa 94-96% wax ku ool ah si looga hortago inaad aad u xanuunsato COVID-19 laba toddobaad ka dib markaad hesho toogasho labaad. Tan ugu muhiimsan, iyaga iyo labadaba 100% kaa caawinaysa inaad kahortagto isbitaalka ama geerida.
Tallaalka Johnson & Johnson ee Janssen
Tallaalka Johnson & Johnson Janssen waa tallaalka adenovirus.
Tallaalka Adenovirus ayaa sharxay: Fayraska 'adenovirus' waa nooc fayras ah oo keena hargabka caadiga ah, oo aan hadda ahayn fayras firfircoon. Tallaalku wuxuu adeegsadaa adenovirus aan firfircooneyn si uu ugu dhaqmo sida side si loogu gudbiyo hidda-wadaha coronavirus ee jirkeena si loogu soo saaro borotiinka coronavirus (MAYA fayraska laftiisa). Borotiinada ayaa markaa iska dhigaya inay yihiin fayras si ay uga caawiyaan habka difaaca jirka inuu fahmo sida loola dagaalamo viruska, oo la mid ah talaalada Moderna & Pfizer.
Waxaad u baahan tahay oo keliya hal duritaan!
Waxtarka tallaalka: Tallaalka Janssen waa 72% wax ku ool ah laba toddobaad ka dib marka aad tallaasho. Tan ugu muhiimsan, sida Moderna & Pfizer, waa 100% kaa caawinaysa inaad kahortagto isbitaalka ama geerida.
Tijaabooyinka tallaalka: Tijaabooyinka tallaalka Janssen waxaa ka mid ahaa kaqeybgalayaal kala duwan kuwaas oo ku tilmaamay Hispanic / Latino iyo Madow ama Afrikaan Mareykan ah. Waxa kale oo ku jiray ka-qaybgalayaal badan oo jiray 60 sano iyo in ka badan oo qaba in ka badan hal xaalad caafimaad. Tijaabooyin ayaa sidoo kale lagu sameeyay goobo ay ka jireen noocyo cusub oo wareegayay, welina waxay ahayd mid si buuxda waxtar ugu leh ka hortagga isbitaal dhigida iyo dhimashada!
Kheyraadka tallaalka COVID-19:
Waa kuwan xaqiiqooyinka tallaalka ee la akhriyo ka hor inta aan la tallaalin:
Johnson & Johnson's Janssen COVID-19 Xaashida Xaqiiqda Tallaalka - Ingiriis
Johnson & Johnson's Janssen COVID-19 Xaashida Xaqiiqda Tallaalka - Isbaanish
Xaashida Xaqiiqda ee Tallaalka Moderna COVID-19 - Ingiriis
Xaashida Xaqiiqda ee Tallaalka Moderna COVID-19 - Isbaanish
Xaashida Xaqiiqda ee Tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 - Ingiriis
Xaashida Xaqiiqda ee Tallaalka Pfizer-BioNTech COVID-19 - Isbaanish
V-Badbaadiyaha Hubiyaha Caafimaadka Kadib Tallaalka | CDC- V-safe waa aalad ku saleysan taleefannada casriga ah oo adiga kugu soo gala ka dib tallaalkaaga COVID-19. Kaqeybgalkaagu wuxuu kaa caawinayaa ilaalinta tallaalada COVID-19 - adiga iyo qof walba!
Bixiyeyaashayada horumarka ayaa si qoto dheer u daryeela bukaannadooda waxayna u yimaadaan bulshadayada khibrado u gaar ah iyo dhaqammo kala duwan